တိုင်းပြည်မှာ သာသနာညှိုးနွမ်း ဂိုဏ်းဂနတွေကွဲ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတာ အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ အစီအမံကြောင့်ပါဘုရား….ခိုင်းစေမှုကြောင့်ပါဘုရား…..” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေက ထိရှလွယ်တဲ့ ပဋိပက္ခဆိုင်ရာသတင်းတွေကို ကျင့်ဝတ်မလိုက်နာဘဲ ရေးသားတာ မသိလို့လား၊ တမင်လုပ်နေတာလား ?
ကျွန်ဆိုတာက လွန်ခဲ့နှစ် နှစ်ထောင်ကျော်လောက်က တရုပ်ရှေးစကားတခုမှာ မြင့်မြတ်တဲ့လူမျိုး လို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ်ဗျ….ကျွန်တော်တို့က အဲ့ကဆင်းသက်လာတာ …. “ »
တိုင်းပြည်မှာ သာသနာညှိုးနွမ်း ဂိုဏ်းဂနတွေကွဲ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတာ အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ အစီအမံကြောင့်ပါဘုရား….ခိုင်းစေမှုကြောင့်ပါဘုရား…..”
ဘုရင်….”ဝန်ကြီးများ…..ငါပျင်းတော်မူတယ်…မေးခွန်းမေးမယ်ဟေ့ ဖြေနိုင်ရင် လယ်ဧက တစ်သောင်းပေးမယ်….မဖြေနိုင်ရင် မောင်မင်းတို့ကို အာမခံမပေးပဲချုပ်….ရုံးချိန်း ၁၂ခါ ထုတ်…. ထောင်ချတော်မူမယ်….”
ဘုရင်…… “ငါ့ပြည်သူတွေကမွဲပြီး ငါအပါအဝင်..မောင်မင်းတို့ဆွေမျိုးတသိုက်ကြ ဘာကြောင့်ချမ်းသာနေရသလဲ …ကာဝန်ကြီးဆိုတဲ့ကောင် ဖြေစမ်းလကွာ”
ကာဝန်ကြီး…”.မှန်လှပါ ဘုန်းတော်ကြောင့် ရှေးဘဝက ကုသိုလ်ကံကြောင့် ဘဝအဆက်ဆက်ကပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ဒါနသီလကြောင့် တွေပါဘုရား……….”
ဘုရင်….”.မှားတယ်…… ရုရှား မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ တရုပ် နိုင်ငံထုတ်သေနတ်တွေကြောင့်ကွ ….”(ရဲမက်များ ကာဝန်ကြီးအား ဖမ်းပြီး အင်းစိန်သို့ပို့စေ)
ဘုရင်…..”ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး ကဘာကြောင့်အဆင့်နိမ့်နေတာလဲ ဘိုမြှင့်ပေးရမလဲ….ပညာဝန်ကြီးဆိုတဲ့အကောင် ဖြေစမ်းလကွာ”
ပညာဝန်ကြီး……”မှန်လှပါ ….ဘုန်းတော်ကြောင့် နိမ့်ကျ(အဲ မှားလို့) သင်ကြားမှု စနစ်ကြောင့်နိမ့်ကျနေတာပါဘုရား….ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ ဘာသာရပ်တွေကို ဘိုလိုမသင်ပဲ သုဒ္ဓ/မိဿဓါတ်..မြူ…စသဖြင့်….အခန့်သင့်သလို ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သင်ကြားစေလျှင် တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ် ဘုရား…..”
ဘုရင်…….”မှားတယ်….မင်ဒရင်း ယူနန် ကွမ်တုံ ဘာသာတွေ ပြောင်းသင်မှ တိုးတက်မှာကွ (ဒီကောင်သောက်ရူးပဲ….ဖမ်းပြီး တံတားလေးကိုအရင်ပို့ပလိုက်စမ်း အဲ့ကောင်ကို ….)”
ဘုရင်……”..ငါ့နိုင်ငံကလူတွေ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ သိပ်မကောင်းတာ အသက်တိုတာရောဂါထူတာ ဘာကြောင့်လဲ…..ဟဲ့ကောင်ကျန်းဝန်ကြီး ဖြေစမ်း”
ကျန်းဝန်ကြီး…..”.မှန်လှပါ ဘုန်းတော်ကြောင့် အများစုကကျန်းမာလျှက်ပါဘုရား…တရုပ်ကလာတဲ့ အစားအသောက်/အရုပ်/စိုက်ပျိုးရေးဆေး/လူသုံးကုန်ပစ္စည်း/ဆိုက်ကယ်တွေကြောင့်် အနည်းငယ်သော လူတချို့သာ သေရုံလေးသေသွားကြတာပါဘုရား….”
ဘုရင်……”မှားတယ်…….ကွကိုသောက်သုံးမကျလို့ စားကြသောက်ကြအသုံးပြုနေပြီး သေတာကို သာကောတို့နာမည်ထည့်မပြောနဲ့ …..ကွ……အသုံးမကျလို့သေတာကွ သေတာတောင် ရိုးရိုးမသေဖူး ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးကို ဖျက်ဆီးသွားကြသေးတယ် ငါ့လိုဥရောပ နဲ့ယူအက်စ်မိတ်တွေသုံးရင် သေပါ့မလားဟ ….ကျန်းဝန်ကြီးကိုဖမ်း ကျေးဇူးရှင်တွေကို အကြည်ညိုပျက်စေမှုနဲ့ ထောင်ချပလိုက်….”
အခု တိုင်းပြည်မှာ သာသနာညှိုးနွမ်း ဂိုဏ်းဂနတွေကွဲ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲကွ…မောင်မင်းဖြေစမ်း”
သာဝန်ကြီး….”မှန်လှပါ ဘုန်းတော်ကြောင့် ပါဘုရား ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ အစီအမံကြောင့်ပါဘုရား….ခိုင်းစေမှုကြောင့်ပါဘုရား…..”
ဝန်ချောင် မာဟန့် ကျောက်လုံး ကျောက်ဟူ လာကြစမ်း သာဝန်ကြီးကိုဖမ်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်း ထောင် ၁၅ နှစ် ချပလိုက်…. နင့်ကြောင့်ဟ နင့်ကြောင့် မယုံရင်နက်ဖြန် သတင်းစာမှာဖတ်ကြည့် နင့်ကြောင့်ဆိုတာ သက်သေသက်ကာယတွေနဲ့ အတိအကျ ဖော်ပြလိမ့်မယ်…..ဟွန်း…..”
This entry was posted on October 17, 2014 at 12:29 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “တိုင်းပြည်မှာ သာသနာညှိုးနွမ်း ဂိုဏ်းဂနတွေကွဲ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတာ အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ အစီအမံကြောင့်ပါဘုရား….ခိုင်းစေမှုကြောင့်ပါဘုရား…..””
October 17, 2014 at 1:07 pm | Reply
September 24 at 10:50pm ·
ဖြေ….. အော် ပန်းရံလုပ်တာကပင်ပန်းတယ်လေ ဒါတောင်တရက် ၃၅၀၀ ပဲရတယ်….ရေသန့်တဗူး ထမင်းတဗူးနဲ့ တရက် ၄၅၀၀ ရလို့ကတော့ ……. လမ်းထဲကဖာခေါင်းဖြစ်ဖြစ် ဆိုက်ကားသမားဖြစ်ဖြစ် ထောက်ခံပျိုက်မှာ…..